पिटर II को Emmerich को दर्शन | Manuel Silveira
← Petrus Romanus, 18 de Mayo de 2021
ایمرچ کا ویژن آف پیٹر II →
पिटर II को Emmerich को दर्शन
Posted on May 16, 2021 by inspiredbythespirit
पीटर द्वितीयको क्याथरीन इमरिच भिजन – १० मे २०२१ | सानो पेबल (littlepebble.org)
[वेबसाइट हेर्नुहोस्: https://meditationsoncatholicism.blog/2021/05/03/emmerichs-vision-of-peter-ii/ ]
पोस्ट मई 3, 2021 द्वारा inspiredbythespirit (Manuel Silveira)
सेन्ट क्याथरीन इमरिचको अन्तिम पोपको दृष्टिकोण:
“हिजो रात मैले पोपको दर्शन पाएको थिएँ। सेन्ट फ्रान्सिसले चर्च र सेन्ट पिटरको बेसिलिका बोकेका एक जना सानो मान्छेको काँधमा बोकेको मैले देखें र उसको अनुहारमा यहूदीको केही चीज थियो। यो धेरै खतरनाक देखिन्थ्यो। मरियम चर्चको उत्तर तर्फ खडा छिन् र उनको किन्डा त्यसमाथि फैलिएको थियो। सानो मान्छे लगभग डबल झुकेको थियो। उहाँ अझै, एक laic छ। मलाई थाहा छ ऊ को हो। बाह्रजना पुरुषहरू जसलाई म सधैं बाह्र नयाँ प्रेरितहरूको रूपमा देख्छु भनेर उसलाई मद्दत गर्नु पर्छ, तर तिनीहरू ढिलो आइपुगे; यद्यपि उहाँ पतन हुन लाग्नु भएको थियो, तिनीहरू सबै एन्जलसको असंख्यको साथ उहाँलाई सहयोग गर्न दगुरे। ” (Vol.2 p.299-300)।
यो २०२० हो; येशू नोभेम्बर २०१० देखि, उहाँ चालीस बर्षमा फर्केर आउनुहुनेछ भनेर येशू भन्नुभए जस्तै हामी घटनाहरू कुर्दै कुर्दै छौं। त्यसोभए त के भयो? म व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्दछु कि येशू फर्कनु भन्दा पहिले पन्ध्र बर्ष सम्म जानु पर्छ – र किन ती संकेतहरू आउँदैछन् भन्ने संकेतहरू हुन् जुन हामी पर्खिरहेका छौं। त्यहाँ हजारौं स signs्केतहरू छन् जुन हामी कुर्दै छौं, तर एउटा कुरा भने पक्का छ, येशू २० 20० को अन्त्य हुनु अघि फर्कनुहुनेछ, किनकि येशू अवधिको अन्तमा बोल्नुहुने अवधि चालीस वर्ष हो – जुन २०50० हो। तर, म विश्वास गर्दछु, येशूले हामीलाई समय दिनुहुनेछैन, तर हामीलाई सint्केत दिनुहुनेछ। त्यसोभए येशूले Mar नोभेम्बर २०१० मा मारिया ईश्वरीय कृपासँग कुरा गर्नुभएको दश बर्ष भइसक्यो; यो अन्त्यको शुरुवात हो, किनकि पूरा चालीस वर्ष November नोभेम्बर २० the is हो, त्यसैले मैले उनलाई प्रभु फर्काउन २० Lord35 दिएँ,
हामी कसरी समयहरू पढ्न सक्षम हुनेछौं? हुन सक्ने सबैभन्दा पहिलो मुद्दा भनेको यो हो: हामी तेस्रो विश्वयुद्धको लागि पर्खिरहेका छौं। यो मध्य पूर्वमा शुरू हुनेछ, किनकि मुस्लिम समूहले यो गठन गर्नेछ, त्यहाँबाट शुरू गर्दै, किनकि उनीहरूले एक समूह गठन गर्ने छन् इजरायलमाथि आक्रमण गर्न। पहिलो आक्रमणका लागि तिनीहरूले आणविक बम प्रयोग गर्नेछन्, जसले युद्ध सुरु गर्दछ र टर्की र रसियालाई यसमा ल्याउनेछ।
मुस्लिमहरूले स्पेन र फ्रान्समा आक्रमण गर्नेछन् – र रूसले जर्मनी र इटालीमा आक्रमण गर्नेछ। चीनले दक्षिण कोरिया, ताइवान र ह Hongक Kongमा आक्रमण गरेर मध्य पूर्वमा आफ्नो सेना ल्याउने छ।
अफ्रिकी देशहरू पुनर्स्थापित हुनेछन्। केही युद्धमा हुनेछन्। अष्ट्रेलिया इन्डोनेशिया द्वारा आक्रमण गरिनेछ। क्यालिफोर्निया समुद्रमा खस्दा अमेरिकालाई दण्ड दिइनेछ। हवाई र यति धेरै टापुहरू समुद्रमा डुब्नेछ किनभने समुद्रको पानी बढ्नेछ र धेरै समुद्री किनारहरू समाहित हुनेछ, किनकि समुद्र हरेक देशमा बढ्नेछ।
अर्को चिन्ह सबै घटनाहरू हुन् जुन चेतावनी अघि प्रभाव पार्नेछ। धेरै देशहरू युद्धमा हुनेछन् र लाखौं मर्नेछन्। पहिलो चेतावनी चिन्ह पृथ्वीमा हिर्काउने एक अन्धकार हुनेछ। यो केहि छ घण्टा अन्धकार हुनेछ। हामीलाई यसको कारण थाहा छैन, तर त्यहाँ एक ठूलो त्रास हुनेछ किनकि विश्व अन्धकारमा एक पूर्व चेतावनीको रूपमा राखिनेछ, जुन महान चेतावनीको लागि मानवजातिलाई तयार गर्नेछ।
फ्रान्सको पेरिस र मार्सिले भूमिमा समतल हुनेछ र धेरै ठूला शहरहरू ध्वस्त हुनेछन् र समतल हुनेछन्।
एन्टिक्राईष्ट महान् चेतावनी भन्दा ठीक पहिले आउँनेछ, तर त्यसले महान युद्धको बेलामा आफूलाई चिनाउनेछ। यो युद्ध केहि महिनाको लागि जानेछ, धेरै लाखौंलाई मार। उसले युद्ध रोक्नेछ र विश्वमा शान्ति ल्याउनेछ, तर यो समयमा महान चेतावनी आउँछ र विश्वका अधिकांश दुष्ट मानिसहरू लाखौंमा नष्ट हुनेछन्। विश्वको जनसंख्या रूपान्तरण हुनेछ किनकि चेतावनीले परमेश्वरबाटको प्रेम र दया देखाउँदछ।
म, मेरो आफैं, चेतावनीको समयको लागि स्वर्गमा लगिनेछु र तेह्र वर्षको उमेरमा लामो समय पछि पृथ्वीमा फर्किनेछु र लामो हुनेछ (f फिट) र मेरो निधारमा एउटा तारा हुनेछ। मलाई सेन्ट पल र सेन्ट पिटरले सम्बोधन गर्नेछु र पोप पिटर अब्राहम दोस्रोको अधिकार पाउनेछु। एन्टिक्राईष्टलाई केहि समयका लागि छाडिनेछ र म सारा संसारका मानिसहरूलाई ख्रीष्टको अनुसरण गर्न नेतृत्व दिनेछु।
म परमेश्वरका मानिसहरूलाई येशू पछ्याउन नेतृत्व गर्नेछु, तर यो समयमा यो ख्रीष्ट विरोधी पूर्ण शक्ति प्राप्त गर्नेछन्; जो फेरि पतन हुन्छन् उनीहरूले उसलाई पछ्याउँदछन् र इसाईहरू लुक्नुपर्नेछ – तर चर्च बलियो हुनेछ। यो साढे तीन वर्ष हुनेछ कि ख्रीष्ट विरोधी पृथ्वीमा शासन गर्नेछन्। पवित्र राजाले यरूशलेम जानेछन र परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन अर्पण गर्नेछन् र मर्नेछन्।
२०२० र २०3535 को बीचमा धेरै कुरा हुनेछ – यो अनुमानित वर्ष मात्र हो – जब येशू फर्कनुहुनेछ।
त्यसोभए हामी के हुनेवाला छ हेरौं, हामी हाल मे २०२० मा छौं, जहाँ संसार एक भाइरसले ग्रस्त छ र लगभग सबै विश्वलाई बन्द गर्दैछ। हाल 3,,२१,, २24२ छन् जसले २२,,,,१4मृत्युसँग भाइरसलाई सम्पर्क गरेका छन्। त्यहाँ अर्को भाइरस आउँदैछ जुन अझ खराब हुनेछ, किनकि यसले फोक्सो र मुटुमा आक्रमण गर्दछ। तसर्थ, मानवजातिलाई परमेश्वरमा फर्काउन संसारले भाइरसहरूको माध्यमबाट गुज्रिरहेको छ। हाम्रा प्रभुले आफ्ना बच्चाहरूलाई फिर्ता लाउन अनुमति दिँदै हुनुहुन्छ। मानिसजाति परमेश्वरतिर नफर्कुन्जेल संसार एकदमै गम्भीर मामिलामा जान लागेको छ।
पहिलो अध्यादेशहरू शुरू भएको छ – अब बाँकी आओ। मध्यपूर्व, इजरायल, इरान, टर्की, सिरिया, लेबनान र इजिप्टले युद्ध सुरु गर्ने छ, तर मुस्लिम देशहरूले स्पेन र फ्रान्ससँग उनीहरूको मुस्लिम जनस with्ख्यासँग लडाई गर्न युद्ध शुरू गर्नेछन् जसले क्याथोलिक राजतन्त्रलाई खेलमा ल्याउनेछ, जसले क्याथोलिकहरूको रक्षा गर्नुहोस्।
पोन्टिफले सबैको एकता घोषणा गरेर सबै विश्वासलाई एक साथ ल्याउँदछ। त्यहाँ युरोपको दस राष्ट्र गठन गर्न एक चाल हुनेछ।
अन्तिम पोप, पोप पीटर अब्राहम द्वितीय फिलिपिन्समा भ्याटिकनको सुधार र एकता ल्याउन लाग्नेछन् – र उनले यो स्थापित गरेपछि उनी फ्रान्सको राजालाई सहयोग पुर्‍याउन चीन, ताइवान, सिंगापुर र त्यसपछि युरोपको यात्रा गर्नेछन्।
तेस्रो विश्वयुद्ध आउनेछ र यसमा सबै राष्ट्रहरू सम्मिलित हुनेछन्, तर यो एउटा क्षुद्रग्रहबाट ठूलो सजाय हुनेछ, जुन मेक्सिकोको नजिकैको समुद्रमा फस्नेछ र धेरै मानिसहरूलाई मार्नेछ।
तेस्रो विश्व युद्धको दौडान येशूले आउँदै गरेको चेतावनीको साथ यसलाई रोक्नुहुनेछ। चेताउनी आउनु भन्दा पहिले एन्टिक्राईष्टले आफूलाई चिनोस्। त्यहाँ धेरै चीजहरू हुन्छन्, तर सब भन्दा महत्त्वपूर्ण घटना भनेको चेतावनी हो।
तपाइँ यसलाई बुझ्नको लागि म यसलाई प्रणालीमा राख्नेछु। भाइरस घटना हुने ठाउँ तर्फ मात्र सानो कदम हो। तल सेट चीजहरू आउने बर्षहरूमा कसरी जान्छन् भन्ने विचार हो। २०२० Apocalypse मा बोलेको घटनाहरूको सुरुवात हो।
त्यसोभए अब हामीसँग धर्मशास्त्रको केही अंशहरू भएका विवरणहरू छन्, हामी विश्वको घटनाहरूमा जानुपर्दछ जहाँ हामी यसलाई पढ्न सक्छौं:
१. कोरोनाभाइरस २०२०
२. दोस्रो भाइरसको साथ
The. मध्यपूर्व इरान, इजरायल, टर्की, सिरिया र अन्य राष्ट्रहरूसँग भडकाउँछ; रसिया
Le. लेबनानले आफैलाई चंगुलबाट जोगाउन गम्भीर कदम चाल्नेछ
The. युरोपियन युनियन विभाजित हुनेछ, युरोपले मुस्लिमहरू – विशेष गरी स्पेन, फ्रान्स र जर्मनीको अंश – पोर्तुगलले आक्रमण गर्नेछ।
The. २०२० र २०30० को अवधिमा फ्रान्सेली मोनार्क र पोप पीटर अब्राहम द्वितीय देखा पर्नेछन् र अर्को दुई बर्षमा तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनेछ।
The. यो अर्को दुई बर्षमा हुनेछ सानो पेब्बलले सेयरहरूलाई भेला पार्नेछ।
The. तेस्रो विश्वयुद्ध चीनले एशियाको समस्त कब्जामा लिएर यूरोपमा सर्नेछ। रसियाले युरोप माथि सर्छ र मध्य पूर्वमा सामेल हुनेछ। युद्ध जारी रहन्छ जबसम्म एन्टिक्राईष्टले उनलाई चाँडो गर्दैन। त्यसो भए एन्टिक्राईष्टले धेरै नष्ट हुनु अघि युद्धलाई रोक्नेछ; त्यसोभए त्यो चेतावनी आउनेछ।
I। म आशा गर्दछु कि आगामी दुई बर्षमा यो चेतावनी कुनै पनि समय आउनेछ किनकि पोप बेनेडिक्ट इटालीबाट बसाइँ सर्नुपर्नेछ र आफ्नो देशमा आफ्नो जीवन गुमाउनुपर्नेछ।
१०. चेतावनी पछि एन्टिक्राईष्ट केही समयको लागि तल झर्नेछ।
११. सबै दुष्टहरू नष्ट हुनेछन् र नरकमा जान्छन् र संसार परिवर्तन हुनेछ।
सबैजना क्याथोलिक चर्चमा सम्मिलित हुनेछन्, तर म एक रहस्यमय तरिकामा पोप हुनेछु।
१ people. धेरै मानिसहरू चेतावनीको अघि उनीहरूकै ठाउँमा फर्कनेछन्।
१ French. फ्रान्सेली राजाले मसँग काम गरेर विश्वलाई मजबुत बनाउने छ।